सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना अनि कसरी भयो अनुत्पादक ? प्रयोगबाटै बनाउने हो उत्पादक
काठमाडौं : अहिले सेयर बजार उत्पादक र अनुत्पादकको बहसले तातेको छ । सेयर बजार त्यही रापमा गर्लामगुर्लुम पनि भएको छ । अर्थमन्त्रीको सेयर, गाडीघोडा तथा घरजग्गा लगानीका अनुत्पादक क्षेत्रहरु हुन् भन्ने भनाई आएसँगै बजार प्रभावित भएको भन्ने ठम्याई सेयर बजारका पण्डितहरु गरिरहेका छन् । कतिले अर्थमन्त्रीलाई धारेहात लाइरहेका छन् त कतिपय यसको पक्षको बहसमा पनि उत्रिएका छन् । तर विषयवस्तु र भनाईको गहिराईमा नपुगी सतही चिन्तन र विवेचनाले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
वास्तवमा के उत्पादक र के अनुत्पादक भन्ने कुराको मिहिन विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रका हरेक साधनहरुको परिभाषा भन्दा प्रयोगको आधारमा विश्लेषण गरियो भने यथार्थको नजिकमा पुग्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले सोझै अमूक क्षेत्रहरु अनुत्पादक हुन् भन्नु भन्दा पनि तिनका प्रयोग कसरी गरिनुपर्ने हो र अहिले कसरी अनुत्पादक ढंगमा तिनको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रष्टोक्ति आएको भए बजारमा अनावश्यक होहल्ला र टिप्पणीहरु हुने थिएनन् होला ।
हुन त बजारमा के हल्ला आउला भनेर अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वले बोल्ने पनि होइन तर सार्वजनिक छविका व्यक्तिहरुले बोल्दा सकारात्मक उर्जा जनमानसमा जाँदा राम्रो होस् भन्नेमात्र यो पंक्तिकारको आशय हो । अचेल हामी सेयर बजार भनेको सट्टेबाजहरुको खेलमैदान मात्र हो भनेर भ्रमपूर्ण बुझाईमा अभ्यस्त भएका छौं । सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना किन भनिएको होला र हामी सेयर बजारको कुन चरण र अभ्यासमा छौं भनेर पहिला बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
हामीकहाँ उत्पादनमूलक र वास्तविक क्षेत्रका उद्योगधन्धाहरुको अंश सेयर बजारमा अत्यन्तै नगन्य छ । जे जति उत्पादनमूलक र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु नेप्सेमा सूचीकृत छन् तिनको कारोबार पनि शून्यप्रायः नै छ । नेप्सेमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा वर्चश्व छ । बैंक तथा वित्तीय सेवाहरु अर्थतन्त्रका सहायक क्षेत्र मात्र हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुको वृद्धि र विकासमा आर्थिक सहयोग गर्नु वित्तीय क्षेत्रको कार्यक्षेत्र हो । तर हामीकहाँ त ताप्के तात्नुभन्दा बिंड नै पहिला तातेको अवस्था छ । अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुको वृद्धि शून्य तर बैंकहरुको ४ गुणा पुँजी वृद्धिको अवस्था छ । यसरी संकलित पुँजी कसरी उत्पादनशील क्षेत्रतिर लैजाने भन्ने दूरदर्शी नीति निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बिषय हो ।
हुन त अहिले अर्थमन्त्रीले बोल्नुभएका कुराहरु दीर्घकालीन रुपमा पुँजीको प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रतिर लैजान गरिएको प्रयासकै एउटा स्वरुप हो भनेर बुझ्न सकिन्छ तर सेयर बजारलाई नै समग्रमा अनुत्पादक भनिदिंदा सेयरका सट्टेबाजहरुमा अल्पकालीन रुपमा नकारात्मक लहर उठ्न गएको हो । निजी क्षेत्रका बैंकहरु नाफामुखी संस्थाहरु हुन् । नाफा कमाउनु तिनको धर्मै हो । तर नाफाको लागि जे पनि गर्ने, आफूलाई खरानी चाहिए अर्काको घरमा आगो लगाउन पनि नहिच्किचाउने नेपालका बैंकहरुको प्रवृत्ति बन्दै गएको पनि हाम्रो यथार्थ हो ।
पुँजीमा ४ गुणा वृद्धि भएपछि नाफा पनि ४ गुणा नै बढ्नुपर्ने बैंकका साहुजीहरुको मानसिकता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु माथिको चर्को दबाब, नियमनकारी निकायले तोकेको मापदण्डै नाघेर गरिएका उग्र लगानीहरु सबै सतहमै आइसकेका छन् । यी सबैका परिणति भनेको बैंकहरुको ब्याजदर बढाएर एकले अर्काको निक्षेप खोस्ने र दुस्साहसी जोखिम मोलेर लगानी बढाउने दुष्चक्रको सुरुवात भएको हो । परिणामस्वरुपः सेयर बजारमा आएको ठूलो आपूर्ति र अझ सेयर बेचेर खाइलाग्दो ब्याजदरमा बैंकमा पैसा राख्ने प्रवृत्तिले वर्तमान सयर बजार हिंउ माथिको तुषारो भने झैं टाक्सिएको पनि हो ।
तिनै बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्य रहेको सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनिदिंदा बजारमा पहिरो जानु स्वभाविकै हो । अब प्रसंग आउँछ के हामीकहाँ उत्पादनमूलक र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नेप्सेमा बाहुल्य हुन्थ्यो भने हामी लगायत हाम्रा अर्थमन्त्रीले सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्नुहुन्थ्यो होला ? अवश्य पनि त्यस्तो हुँदैनथ्यो । सेयर बजार भनेको दोस्रो बजारमा गरिने सट्टेबाजी मात्रै होइन ।
उत्पादनमूलक र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न, व्यवसायिक दायरा बढाउन पुँजी बजारका विभिन्न औजारहरु प्रयोग गर्छन् । त्यसमा प्रारम्भिक सेयर, हकप्रद सेयर, ऋणपत्र जस्ता सेयर बजारका उपकरणहरु पनि पर्दछन् । सेयर बजारमा उत्पादनमूलक र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुले गर्ने यस्ता गतिविधिहरुलाई अनुत्पादक भन्न सकिन्छ ? त्यसैले सेयर बजार र उत्पादनशील क्षेत्रको नजिकको सम्बन्ध रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रहरु उत्पादकमा कसरी परिणत हुनसक्छन् ? यो हेर्ने काम पनि सरकारको हो । उदाहरणका लागि सबै अटोमोबाइल्स र घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक भन्न पनि नमिल्ला । सामाजिक सुरक्षा नभएको, व्यवस्थित आवास योजना नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा व्यक्तिगत आवासका लागि गरिएको लगानी नागरिकहरुको बाध्यता हो । कि त सामुदायिक आवासको व्यवस्था राज्यस्तरबाट हुनुप¥यो नभए त व्यक्तिगत आवाशमा जनस्तरको लगानी त जान्छ नै, चाहे त्यो उत्पादक होस् वा अनुत्पादक किनकि त्यो निर्विकल्प छ । त्यसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भनेर चिच्याएर मात्रै के गर्नु ?
त्यसैले कसैले लगानीको लागि घरमाथि घर, जग्गामाथि जग्गा किन्छ वा पुँजीको परिचालन रोक्का हुनेगरी राख्छ भने निश्चित रुपमा त्यो अनुत्पादक लगानी हो । तर कसैले व्यवसायको लागि, कारखानाको लागि वा सानोतिनो स्वरोजगारीका लागि घर वा जग्गा किन्छ भने जनताको लागि त त्यो उत्पादक लगानी हो, भलै सरकारको नजरमा त्यो अनुत्पादकै ठहरिएला । त्यस्तै उद्योगधन्दामा लगाइएका सवारी साधनहरु र अटोमोवाइल, पार्टपुर्जाहरु कसरी अनुत्पादक होलान त ? अटोमोबाइल भनेको धनी र विलासी वर्गले चढ्ने चिल्ला, महँगा कारहरु मात्रै हुन् भनेर बुझ्नु पनि भएन ।
सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो भनेर भाषणबाजी गरेर मात्र पुग्दैन । आजसम्म उद्योगधन्धा चलाउने उद्यमीहरुले के कति प्रोत्साहन पाए ? व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक स्वार्थमा रंगाउने र अझ नाफामुखी बनाउन उद्यत गराउन वातावरण पनि नभएको हो र ? कति समय भयो र हामीले १८ घन्टे लोडसेडिगबाट मुक्ति पाएको ? ऊर्जा अभावमा प्याकप्याक भइरहनुपर्ने, श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धको जाँतोमा पिसिइरहनुपर्ने, राजनैतिक चन्दा, हफ्ताबन्दी र नजाने के के व्यवधानहरुको दुश्चक्रमा परिरहनुपर्ने वातावरण र नियतिले नै होइन र जनमानसमा उद्यमले क्यै हुन्न, थपक्क जग्गा किने लगानी सुरक्षित र काइदाको फाइदा हुन्छ भनेर जनतालाई सिकाएको ? सेयरमा लगानी नै नाफा घाटा जे भएपनि उद्योगको झन्झटबाट मुक्त लगानी हो भनेर छाप पारेको ?
लगानीको खोलो अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादक क्षेत्रतिर लैजान सरकारको नीति नै सबैभन्दा ठूलो र सबल उपाय हो । सरकारी प्रोत्साहनको अभावमा दिनानुदिन रुग्ण हुँदै गइरहेका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिन सरकारलाई कसले रोकेको छ र ? कर सुविधा, लगानीमैत्री कर्मचारीतन्त्र र वातावरण बनाउन ढिलाई गर्नुपर्ने के कारण छ र ? त्यसैले अमूक क्षेत्रलाई अनुत्पादकको बिल्ला मात्र भिराएर पुग्दैन । तिनलाई उत्पादक क्षेत्रमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने सिर्जनात्मक कलाकारिता पनि सरकारको खुबीभित्र पर्नुप¥यो । त्यसैगरी दीर्घकालमा सेयर बजारलाई, रियल स्टेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा डो¥याउन कम्तिमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले बुझ्नुभएको छ भन्ने आशा गरौं । सत्तोसरापले मात्रै केही हुने होइन ।
अर्थमन्त्री सेयर कारोबारीका मात्रै होइनन्, समग्र मुलुकका हुन् र मुलुकमा सेयर बजारको भन्दा ठूला र चाँडो समाधान गर्नुपर्ने एजेण्डाहरु पनि छन् भन्ने मनन् गरौं । त्यसबाट पनि केही सकारात्मक सोचको सुरुवात हुनसक्ला । अर्थमन्त्रीले दिगो सुधारका लागि पिलो निचोर्न खोज्नुभएको हो भने क्षणिक पीडा भएपनि भावी दिनमा जनताले राहत पक्कै पाउलान् । अहिलेलाई यही आशा गरौं ।
लेखक सेयर बजार विश्लेषक तथा प्रशिक्षक हुन् ।